iMovie uye Yekupedzisira Kucheka inovandudzwa nemabasa matsva | Ndinobva mac
Apple zvinoshandiswa hazviwanzo kuwedzera zvakanyanya maererano nekuvandudzwa, saka pese panoburitswa vhezheni itsva, tinomanikidzwa kutaura nezvavo. Pane ino nguva, iwo maApplication ekushandisa ayo akagadziridzwa ari Final Cut Pro, iMovie, Compressor, uye Motion.
Vhidhiyo yekugadzirisa kunyorera, iMovie, uye Yekupedzisira Kucheka Pro vakagamuchira maficha matsva ekuvandudza kufambiswa kwemabasa pamwe nezvimiro zvitsva. Compressor uye Motion zvakagadziridzwawo, asi chete kugadzirisa kugadzikana. Kana iri chitsungo, zvingangoita (zvisina kunyatsotsanangurwa mumanotsi ekuvandudza) kuti Apple yakagadzirisa nyaya dzekupa dzaikonzera maMac ine processor yeM1 kupunzika.
Iyo yekuvandudza ye iMovie, iyo inobata 2.3 GB, inowedzera gumi nematanhatu mamiriro, mitsara yakasimba yemavara uye nemavara atinogona kushandisa chero vhidhiyo. Iyi vhezheni, nhamba 16, inogadzirisa zvakare dambudziko rakatadzisa kupinza mavhidhiyo kubva kuiyo iMove 10.2.4 yeIOS, vhezheni iyo nenzira haina kuwana chero zvidzoreso kunyangwe ichiti kazhinji inofambidzana anoshanda masisitimu.
Nezve iyo yekuvandudza ye Kwekupedzisira Cheka Pro, iyo iko kunyorera kunosvika vhezheni 10.5.3, inobata 3.1 GB uye ichiwedzera mukusimudzira kugadzikana, mabasa matsva senge mukana wekugadzira nekugadzirisa makoramu maonero uye kugadzirisa sarudzo kana uchiraira mavhidhiyo aanoshandisa mumavhidhiyo. Uye zvakare, nzira nyowani dzekutsvaga midhiya dzakawedzerwa vachishandisa manotsi, clip mazita uye mamaki.
Kugadziridza Compressor, inova vhezheni 4.5.3, vhezheni iyo iyo inowedzera mukuwedzera kugadzikana kwekuvandudza, ikozvino ine zviziviso nezve kufambira mberi kwemabatch uye nyowani yakadzamidzirwa odhiyo tsananguro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » iMovie uye Yekupedzisira Kucheka inovandudzwa nezvitsva maficha
Aya ndiwo mashandisiro anoita Apple Pay kubva kuSafari pane yako Mac